Donald Trump oo shaaciyey magaca madaxweyne uu rabay in la dilo
Madaxweynaha Mareykanka ayaa horey u dafiray warkaan kadib markii lagu kashifay buug uu qoray wariye.
WASHINGTON, US – Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa Talaadada maanta ah qirtay in uu rabay in shirqool lagu dilo dhigiisa Suuriya, Bishaar Al Assad, kadib markii uu sanadkii 2017-kii adeegsaday hub kiimiko ah.
Qiraalkaan ayaa burinaya beenin uu horey Trump ku dafiray warkaan. Sidoo kale, wuxuu wiiqayaa sheegashooyinkiisa in uusan dagaal dhiiragelin.
"Waxaan jeclaan lahaa in uu meesha ka baxo. Dhamaan waan u sheegay isaga. Mattis ma uusan rabin arrintaas," ayuu Trump ku sheegay wareysi uu siiyey barnaamijka caanka ah ee la yiraahdo Fox and Friends.
Jim Mattis ayaa ahaa Xoghayaha Gaashaandhiga Mareykanka. "Mattis wuu kasoo horjeeday inta badan qorshahaas," ayuu hoosta ka xariiqay.
Warka ku saabsan in Trump uu rabay in la dilo Asad waxaa soo shaac-bixiyey wariyaha Bob Woodward kadib buug uu qoray sanadkii 2018-kii.
Donald Trump ayaa wuxuu sheekadaas iska fogeeyay laba bilood kadib markii uu buugaas oo baxay, wuxuuna wariyeyaasha u sheegay "shirqoolka dilka Assad marnaba la dhaqan-gelin, mana laga yaabo la dhaqan-geliyo".
Tan iyo markii la doortay Trump, ciidamada Mareykanka ayaa sare u qaadey duqeymaha dhanka cirka iyo adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna beegsadeen horjoogeyaal argagixiso iyo saraakiil kale.
Qaasim Suleymaani, taliyihii sirdoonka Iiraan iyo Abuubakar Al Baqdaadi, amiirkii Daacish, ayaa kamid ah shaqsiyaadka ku baxay gacanta Trump.
Qirashada Donald Trump ayaa caddeyn u noqon karta in Mareykanka uu ka baaqsaday howlgalo kale oo uu ku khaarijin lahaa horjoogeyaal iyo saraakiil ciidan oo laf-dhabar u ah qaar kamid ah dowladaha ay xiisada kala dhaxeyso.
Kororka weerarada cirka waxaa barbar socda khasaaraha rayidka oo aan magdhow laga siin gabood-falka.
Caawiyaha shaqsiga ah ee gabadha Trump oo laga helay Coronavirus
Caalamka 10.05.2020. 11:10
Ilhaan Cumar oo dalbatay in loo naxariisto ninkii dilka ugu hanjabay
Caalamka 20.11.2019. 08:22
Trump oo magacaabay lataliyihiisa cusub ee arrimaha amniga
Caalamka 18.09.2019. 16:39
Trump oo ka hadlay in Mareykanka doonayo in uu rido hogaanka Iiraan
Caalamka 27.05.2019. 11:46
Madaxweyne hakiyey hadal-jeedin kadib xaalad lasoo dareystay
Caalamka 13.08.2020. 09:10
Walaaca ku saabsan in Trump uu helaalay Coronavirus oo sii kordhay
Caalamka 07.05.2020. 20:00
Farmaajo oo dib boorka uga jafay qodob oo kol hore ololaha ku galay 27.09.2020. 06:30